Fanabeazana ny ankizy : namoaka boky roa ny « Editions jeunes malgaches » | NewsMada
Fanabeazana ny ankizy : namoaka boky roa ny « Editions jeunes malgaches »
Anisan’ny mbola lesoka amin’ny fanabeazana eto Madagasikara ny tsy fahampian’ny boky ho an’ny ankizy. Nitondra ny anjara birikiny ho fanarenana ny lesoka ry zareo ao amin’ny « Editions jeunes malgaches ».
Boky roa avy hatrany no indray navoakan’ny « Editions jeunes malgaches » hoenti-manampy amin’ny fanabeazana ny zaza. Boky voalohany, « I Vonindrano sy i Zavonandro », angano nosoratan’i Arikaomisa Randria, noravahin-dRazafindrainibe Max sary miloko natao tanana. Rajaonarison Helihanta kosa no nanao ny fandikan-teny ny tantaran’ny « I Vonindrano sy i Zavonandro » amin’ny fiteny frantsay. Boky amin’ny teny malagasy sy teny frantsay namoahan’i Arikaomisa Randria ny aingam-panahiny sy ny fikarohana nataony ny amin’ny nahatonga ny zavona hamangy tsy tapaka ny voahirana isaky ny maraina amin’ny vanim-potoan’ny ririnina.
Boky faharoa navoakan’ny « Editions jeunes malgaches » ny « Mianatra mamaky teny », nosoratan-dRandriatsizafy Marie Esther sy Razanadrakoto Berthine Randriantsizafy. I Roddy kosa no nanao ny sary miloko natao tanana mandravaka ity boky ity. Mifanaraka rahateo amin’ny fianarana mamaky teny voasoratra ao anatin’ny pejy tsirairay ny sary. Ohatra, raha mianatra mamaky ny renintsoratra « s » ny zaza, mifandraika amin’izay ny sary sy ny fehezanteny « sasa lamba no lahasan’i Soa sy i Solo », miaraka aminy.
Anisan’ny mampiavaka ireto boky ireto ny akora nanaovana azy. Manana fonony mafy sy mahasarika ny maso avy hatrany izy ireto. Toy izany ihany koa ny ao anatiny. Fomba iray mahomby hoentina mampita fahalalana haingana amin’ny zaza sy ny ankizy rahateo ny tahaka izany.